အာကာသစခန်း ပူးပေါင်း လေ့လာဆောင်ရွက်မှုတွင် နိုင်ငံတကာအား တရုတ်နိုင်ငံက ကြိုဆိုကြောင်း စက္ကူဖြူစာတမ်း ဖော်ပြ - Xinhua News Agency
တရုတ်နိုင်ငံအာကာသစခန်း စက်ရုပ်လက်တံဖြင့် ကုန်တင်အာကာသယာဉ် ရွှေ့ပြောင်းစမ်းသပ်မှုကို ပေကျင်း အာကာသယာဉ်ထိန်းချုပ်ရေးစင်တာမှ ရိုက်ကူးရာ Tianzhou-2 ကုန်တင်အာကာသယာဉ်နှင့် Tianhe အာကာသစခန်းပင်မခန်း ပြန်လည်ချိတ်ဆက်ထားကို ဇန်နဝါရီ ၆ ရက်က တွေ့ရစဉ်(ဆင်ဟွာ)
တရုတ်နိုင်ငံသည် ၎င်း၏အာကာသစခန်းကို အသုံးပြု၍ နက္ခတ္တဗေဒ လေ့လာစောင့်ကြည့်မှု၊ ကမ္ဘာဂြိုဟ်သိပ္ပံနှင့်သုတေသန၊ အာကာသသိပ္ပံစမ်းသပ်မှုများကို လာမည့် ၅ နှစ်တွင် ဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း စက္ကူဖြူစာတမ်း၏ သောကြာနေ့ (ဇန်နဝါရီ ၂၈ ရက်) ထုတ်ပြန်ချက်များအရ သိရသည်။
တရုတ်နိုင်ငံ၏အာကာသစီမံကိန်း ၂၀၂၁ ခုနှစ်မျှော်မှန်းချက် စက္ကူဖြူစာတမ်းကို တရုတ်နိုင်ငံ နိုင်ငံတော်ကောင်စီ သတင်းနှင့်ပြန်ကြားရေးရုံးမှ ထုတ်ပြန်ခြင်း ဖြစ်သည်။
အာကာသစခန်းအစိတ်အပိုင်းနှစ်ကို ယခုနှစ်အတွင်းမှာ တရုတ်နိုင်ငံသည် လွှတ်တင်ပြီး အာကာသစခန်းတည်ဆောက်မှုကို အပြီးသတ်ဆောင်ရွက်မည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
လက်ရှိတွင် Tianhe အာကာသစခန်းပင်မခန်းတွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်နေသော အာကာသယာဉ်မှူး ၃ ဦး လိုက်ပါသည့် Shenzhou-13 မစ်ရှင်သည် တရုတ်နိုင်ငံ၏ လူလိုက်ပါအာကာသကဏ္ဍတွင် အချိန်အရှည်ကြာဆုံးဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
အာကာသယာဉ်မှူး လေ့ကျင့်ရွေးချယ်ရေး၊ ပူးတွဲပျံသန်းရေး စသည့် ကဏ္ဍများတွင် တရုတ်နိုင်ငံနှင့် ပြည်ပနိုင်ငံများ ပို၍ ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားမည် ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
တရုတ်နိုင်ငံ ဦးဆောင်သော နိုင်ငံတကာ လကမ္ဘာသုတေသနစခန်း စီမံကိန်း ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကိုလည်း အားဖြည့်ဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း ရေးသားထားသည်။ ယင်းစခန်းတည်ဆောက်မှုနှင့်လေ့လာမှုတွင် နိုင်ငံတကာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေး မိတ်ဖက်များ မစ်ရှင်၏မည်သည့်အပိုင်းမည်သည့်အဆင့်ကိုမဆို ပါဝင်ကြရန်လည်း တရုတ်နိုင်ငံက ဖိတ်ခေါ်ကြောင်း စက္ကူဖြူစာတမ်းတွင် ဖော်ပြထားသည်။
ထို့အပြင် ဂြိုဟ်သိမ်ဂြိုဟ်မွှားနှင့် ဂြိုဟ်များအကြား လေ့လာရေးကဏ္ဍ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကို ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်ဆောင်ရွက်သွားမည် ဖြစ်ကြောင်း ဆိုသည်။
လာမည့် ၅ နှစ်တွင် တရုတ်နိုင်ငံသည် အီတလီ၊ ဘရာဇီးနှင့်ပါကစ္စတန် စသည့် နိုင်ငံများနှင့်အတူ ဂြိုဟ်တု အင်ဂျင်နီယာကဏ္ဍနှင့်နည်းပညာကဏ္ဍပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု သွားမည်ဟု ဆိုသည်။
ရုရှား၊ အမေရိကန်နှင့် အခြားနိုင်ငံများ၊ နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းများနှင့်အတူ အာကာသစီမံခန့်ခွဲရေးဆိုင်ရာ ဆွေးနွေးမှုများ ပြုလုပ်သွားမည် ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။ (Xinhua)
China welcomes int’l cooperation in space station, explorations: white paper
Photo taken on Jan. 6, 2022 at Beijing Aerospace Control Center in Beijing, capital of China, shows the transposition test of the Tianzhou-2 cargo craft using its space station’s robotic arm. (Xinhua/Guo Zhongzheng)
BEIJING, Jan. 28 (Xinhua) — China will employ its space station for carrying out astronomical observations, Earth science and research, and space science experiments in the next five years, according toawhite paper published Friday.
The white paper, titled “China’s Space Program: A 2021 Perspective”, was released by China’s State Council Information Office.
The country plans to complete the construction of its orbiting space station this year after the launches of the station’s two science modules. The current six-month Shenzhou-13 mission by three taikonauts aboard the Tianhe core module is China’s longest in manned space program.
It also highlights that China will conduct dialogue with Russia, the United States and other countries as well as relevant international organizations on outer space governance. ■